Ny androaniko | 4
[Ankapobeny ] 21 Martsa, 2019 12:24
Avy dia tsaroako ny lelako vakivaky sy naharary ahy loatra noho ireo "stock tampon" nilaharanay sy ry Maria Katisoa tamin'ny 5 maraina isan'andro tamin'ny andron'ny revolisionina sosialista tamin'ireny taona 80' ireny. Tsy tsaroako na 300g na 500g isaky ny olona voasoratra anaty kariném-pokontany ny anjaran'ny fianakaviana fa dia izay aloha no fanatanjahantena isa-maraina nahazo ny andianay adolantsento tamin'ireny fotoana ireny. Tsy ny vary ihany fa ny menaka, ny savony, ..eny hatramin'ny mofo dipaina ihany koa.
Dia kivy hoe miverina ny kariné-pokontany sy fatram-bary voafetra hividianana ireto vary sinoa...1000 Ar hono ny vary mora, raha toa ka 1225 izy ao an-tsompitra ao ao Ambatondrazaka ao. Ka tsy naleo ve nanafatra tamin-dr'i gaona, mba isika Malagasy ihany no manjifa ny antsika malagasy sady mahasalamana ny varintsika ?
Sa tanaty #Velirano hoe tsy maintsy any amin-dr'i kelimaso ilay "plan d'urgence sociale" voalaza eto ?
Tena mba fanamby tamin'ny andron'ny revolisionina sosialista mihitsy ny fahaleovan-tena ara-bary sy ny fialana amin'ny habadoana amin'ny taona 2000. Kanefa dia mbola eto isika izao. Ny habadoana moa dia miha-mahazo vahana indray aza satria na ny fomba fanoratra na ny fomba firesaka ankehitriny dia miha-mahonena hatrany hatrany.
Tena mbola nofy ireny... nofy ilay hoe hitsangana amin'ny fandohalihana ilay Nosiko.
[Aingam-panahy ] 17 Febroary, 2019 22:54
Misy fomba maro amoahana ny mavesatra ao am-po mba ahafahana mandroso.
Isaky ny mijery ireo sariko maromaro nomen'i zoky Blou ho ahy aho manko, izay sary tsy tanatin'ireo nozarainy ao amin'ny pejiny satria tena sary "manokana", dia miteny irery hoe isaky ny clic clic-n'ny fakan-tsariny dia mirima amin'ny zavatra tsy navoakan'ny vavako.
Sary nandritra ny fiondrehana sy nanomezana voninahitra farany an'i Landy izay nodimandry tampoka tao Paris tamin'ny 26 janoary araka ity vaovao ITY sy ITY.
Misaotra anao, ry namako
Nandrakitra ho sary,
Ny hiaka mba notanako
Tam-poko izay narary.
Ny maso vonton-drano
Nafenina amin'ny tsiky,
Izaho tsy reny intsony
Mandinika azy tony
Napetrakao ho ahy
Ho tsiaro an'ilay namana,
Narindrina ny vata.
Nisaorana Ny Ray
Nampindrana dia naka
ikalamako, 17 febroary 2019.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 53 54 Manaraka»